Alto's Adventure: Spirit of the Mountain azo alaina izao ao amin'ny Apple Arcade | iPhone News
Angel Gonzalez | 26/03/2022 18:00 | Lalao IPhone
Apple Arcade manohy ny fanitarana azy tsikelikely. Na dia kely aza ny fahombiazana, Apple dia mbola resy lahatra hanolotra ity famandrihana ity ho an'ny serivisy ahafahany miditra amin'ny lalao mihoatra ny 200. Na izany aza, tato anatin'ny volana vitsivitsy, nanomboka nihantona ny lohateny ary tsy misy safidy mahaliana vaovao amin'ny fandoavana ny famandrihana. Ny fanampiny vaovao dia ny lalao "Alto's Adventure: Spirit of the Mountains" avy amin'ny mpamorona fanta-daza Snowman sy ny lalao hafa toa ny The Lost City. Amin'ity fotoana ity, Lalao Remastered ny Spirit of the Mountains ny tany am-boalohany izay nahita ny hazavana tamin'ny 2015.
The Spirit of the Mountains, lalao Alto's Adventure vaovao ao amin'ny Apple Arcade
Miaraha amin'i Alto sy ny namany amin'ny odyssey tsy misy farany eo amin'ny solaitrabeny. Fantaro ireo havoana alpine tsara tarehy any amin'ny tanindrazany, ny tanàna kely nofinofiny, ny ala tranainy ary ny rava tranainy efa nilaozana rehefa miaraka amin'izy ireo ianao amin'ny fikatsahany ny Fanahin'ny Tendrombohitra.
Teny an-dalana, dia hamonjy llamas nandositra ianao, mitsambikina eny an-tampon-trano, mitsambikina amin'ny hantsana mampihoron-koditra, ary mamitaka ny loholona ao an-tanàna, mandritra ny fahasahiana amin'ireo singa miovaova sy mikaroka tsiambaratelo miafina ao anaty tendrombohitra.
Nanapa-kevitra ny developer Snowman remaster ny lalao fanta-daza "The Spirit of the Mountains" izay navoaka tamin'ny 2015. Ity lalao vaovao ity dia navoaka tao anatin'ny famandrihana Apple Arcade ary miaraka amin'izany dia mikasa ny hamelona indray ny lalao misy isa mihoatra ny 4,5 amin'ny 5 amin'ny lohateny voalohany. Anisan'ireo zava-baovao amin'ity lalao ity no hitantsika:
Fandefasana fizika miorina amin'ny fluide, kanto ary mampientam-po
Terrain novokarin'ny rafitra mifototra amin'ny tena snowboard
Ny jiro mavitrika tanteraka sy ny vokatry ny toetrandro, ao anatin'izany ny andohalambo, lanezy ary oram-baratra, zavona, kintana fitifirana, sns.
Rafitra fametahana bokotra iray, mora ianarana nefa sarotra fehezina
Combos isan-karazany mba hampitomboana ny isa sy ny hafainganana
Ankoatra izany, Alto's Adventure: Fanahin'ny Tendrombohitra mitambatra amin'ny Game Center mba hanohitra ny namantsika hahazo ny combo tsara indrindra sy ny isa ambony indrindra. Toy izany koa manoro hevitra ny fampiasana écouteur mba hankafy mozika tany am-boalohany mandentika. Farany, dia lalao manerantany miaraka amin'ny fanohanana iCloud Mifanaraka amin'ny iPhone sy iPad.
Raha te hidirana dia mila manana famandrihana mavitrika amin'ny Apple Arcade ianao amin'ny 4,99 euros isam-bolana na amin'ny alàlan'ny famandrihana amin'ny Apple One.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Alto's Adventure: Spirit of the Mountain dia azo alaina ao amin'ny Apple Arcade
Ny fakan-tsary iPhone 14 Pro dia ho matevina kokoa rehefa mampihatra 48 megapixels
Tian'ny Vondrona Eoropeana ny hampita hafatra eo amin'ny fampiharana hafatra rehetra